हामी C.A. = सेवा Matango ServiMatango
Servimatango C.A. एक कम्पनी बनाउन र अनलाइन आफ्नो कारोबार विकास गर्न मानिसहरू र व्यवसायीहरूको मदत गर्न समर्पित छ.
हामी Ibarra-Imbabura-इक्वेडर शहर मा मुख्यालय संग इन्टरनेट मार्फत व्यापार मा लगे एक कम्पनी. वीओआईपी लागि भाडा सेवा समर्पित सर्भर उपलब्ध यसको गतिविधिहरु केंद्रित, होस्टिंग, डोमेन र वेब प्रयोग प्रयोगकर्ता लागि अन्य डिजिटल समाधान.
हामी अभिनव विशेषताहरु लचिलो र रचनात्मक सेवा शामिल द्वारा हाम्रा अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगिहरु द्वारा खडा, व्यक्तिगत सेवा संग संयुक्त, विशेष काम एक टीम, सहयोगीहरूको हाम्रो उत्कृष्ट समूह, हाम्रो ग्राहकहरु लागि पेशेवर प्राविधिक सहयोग र उच्च गुणवत्ता सेवा.
हामी हाम्रो ग्राहकहरु अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट सेवाहरू इष्टतम प्राविधिक गुणवत्ता को प्रावधान माध्यम आर्थिक वृद्धि गर्न योगदान कि सफल कारोबार बनाउन र विकास गर्ने अवसर प्रदान गर्न, संसारमा सबै भन्दा राम्रो विशेषज्ञहरु द्वारा समर्थित.
उच्च गुणवत्ता सेवाहरूको प्रावधान गर्न प्रतिष्ठा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता वृद्धि, सेवा र मानव प्रतिभा को प्रशिक्षण उत्कृष्टता लागि पूर्वाधार को Forefront र उल्लेखनीय मा.
Imbabura को प्रान्तमा पहिले केही समय; दुई ठूलो visionaries फ्रेंकलिन र Nelly ठूलो विचार को लागि जाने निर्णय: "Ibarra-इक्वेडर ठूला कुराहरू गर्न सक्छन् भनी प्रमाणित".
अनि यति सफलता आफ्नो सडक थाले: मा लागू 2008, सेवा किराया / को भाडा ServerVoip.com सर्भर; सिर्जना र आफ्नै व्यापार इन्टरनेट टेलिफोनी विकास गर्न मानिसहरू र व्यवसायीहरूको मदत (VoIP) र Alosip.com संग हात, इंटरनेट कल लागि मिनेट प्रदान गर्न.
कारण यी सेवाहरूको निरन्तर वृद्धि गर्न, आफ्नो कम्पनी गठन गर्ने निर्णय र कानूनी नाम दर्ता: Matango सेवा कम्पनी लिमिटेड “ServiMatango C.A”.
मा सुरु आपरेशन 2012 व्यक्तिविशेष र तिनीहरूले बनाउन र संसारमा कहीं पनि आफ्नै इन्टरनेट व्यापार बढाउन सक्छौं त कारोबार गर्न धेरै सेवाहरू प्रदान को उद्देश्य संग. त्यो उल्लेखनीय छ, VoipSwitch मंच संग सर्भर renting इन्टरनेट कल सेवा लागू गर्न, यो कम्पनीको मेरुदण्ड हो.
स्वस्थ कार्य पर्यावरण
म, फ्रेंकलिन खीरे:
“म मेरो compatriots देखाउन चाहनुहुन्छ, जीवनमा सफल हुन अन्य देशहरूमा बसाइ सराइ गर्नु आवश्यक छैन. यहाँ इक्वेडरको वा देशमा तिनीहरूले ड्राइव संग निवास कहाँ, अध्ययन, संकल्प र उत्साह; तपाईं के तपाईं बाहिर जब तपाईं ठूलो कुरा प्राप्त गर्न सक्छन् कि ती नै इच्छा संग”.
गर्न एस स्वागत ServiMatango.com: मिलन हाम्रो टीम
हामी विभिन्न क्षेत्रमा अत्यधिक प्रशिक्षित र विशेष पेशेवर को एक टीम हो: tecnología, सफ्टवेयर, विकास, मार्केटिङ, ई-मार्केटिङ, डिजाइन, सेवा अनुरोध पूरा गर्न आवश्यक ज्ञान संग प्राविधिक सहयोग र ग्राहक सेवा.
व्यापक सल्लाह प्रदान, हाम्रो ग्राहकहरु हामीलाई छनौट गर्न जारी बनाउँछ भन्ने जोडी मूल्य छ.
बजार र बिक्री
नमस्कार म फ्रेंकलिन Matango हुँ, म ServiMatango मा collaborated र बनाउन र अनलाइन व्यापार विकास गर्न मानिसहरू र व्यवसायीहरूको मदत गर्न आफूलाई समर्पण.
“म सिर्जना र इन्टरनेट व्यापार विकास व्यक्तिविशेष र कम्पनीहरु व्यापक सल्लाह प्रस्ताव”.
नमस्ते म Nelly Matango छु, म ServiMatango मा collaborated र बनाउन र अनलाइन व्यापार विकास गर्न मानिसहरू र व्यवसायीहरूको मदत गर्न आफूलाई समर्पण.
“म प्रबन्ध र म इंटरनेट व्यापार उचित कार्य लागि आवश्यक स्रोत नियन्त्रण”.
नमस्ते म Andrea Maldonado छु, म ServiMatango मा collaborated र बनाउन र अनलाइन व्यापार विकास गर्न मानिसहरू र व्यवसायीहरूको मदत गर्न आफूलाई समर्पण.
नमस्ते म Fernando मोलिना छु, म ServiMatango मा collaborated र बनाउन र अनलाइन व्यापार विकास गर्न मानिसहरू र व्यवसायीहरूको मदत गर्न आफूलाई समर्पण.
“इन्टरनेट व्यापार मा विशेषज्ञता प्राविधिक परामर्श प्रदान”.
नमस्कार म Jessenian Tequiz हुँ, म ServiMatango मा collaborated र बनाउन र अनलाइन व्यापार विकास गर्न मानिसहरू र व्यवसायीहरूको मदत गर्न आफूलाई समर्पण.
“रचनात्मक विचार अनलाइन व्यापार विकास”.
नमस्ते म परी Cedeño छु, म ServiMatango मा collaborated र बनाउन र अनलाइन व्यापार विकास गर्न मानिसहरू र व्यवसायीहरूको मदत गर्न आफूलाई समर्पण.
“विकास सफ्टवेयर अनलाइन व्यापार प्रक्रियाहरू स्वचालित गर्न”.
हाम्रो सेवा: यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Respetamos 100% tu privacidad, हामी स्प्याम पठाउँदैनौं र तपाईंको जानकारी कहिले पनि साझेदारी हुँदैन. Revisa nuestra política de privacidad
ईमेल मार्केटिंगGetResponse द्वारा
ठेगाना: जुआन फ्रान्सिस्को सेभालोस 3-55 र लुइस तोरो मोरेनो, Ibarra-Ecuador